Guddoonka BF oo kulan xasaasi ah la yeeshay ATMIS kahor doorashada + Sawirro - Caasimada Online
Home Warar Guddoonka BF oo kulan xasaasi ah la yeeshay ATMIS kahor doorashada +...
Guddoonka BF oo kulan xasaasi ah la yeeshay ATMIS kahor doorashada + Sawirro
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) iyo Guddoomiyaha Aqalka Sare Senator Cabdi Xaashi Cabdullahi ayaa waxa ay kulan ku saabsan amniga doorashada la yeesheen Gudigga qabanqaabada doorashada Madaxweynaha 10aad ee JFS iyo sarkiisha sare ee howlgalka ATMIS.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka BFS Sheekh Aadan Maxamed Nuur iyo Guddoomiyaha Aqalka Sare Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa saraakiisha faray in ay ka wada shaqeeyaan sidii ay isaga kaashan lahaayeen in doorashada ay ku dhacdo si nabadoon.
Doorashada Madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay dhacdo 15-ka May 2022 oo ay innaga xigto wax ka yar 48 saacadood, taas oo ka dhici doonta Teendhada ciidanka Cirka ee Afisyooni.
Taliska ciidamada Booliska Soomaaliyeed ayaa shaaca ka qaaday in laga bilaabo 9:00 fiidnimo ee caawa bandow lagu soo rogay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, kaas oo ku ekaan doono aroorta hore ee Isniinta.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku sugan inta badan siyaasiyiinta Soomaalida kuwaas oo doonayo inay qeyb ka noqdaan hoggaamiyaha cusub ee loo dooran doono Soomaaliya.
Waxaa is diiwaan geliyey illaa 39 musharax oo u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya, inkastoo ay jiraan musharixiin qaar oo la sheegay inay tanaasuleen.